David na-agbaba n'ime iji nweta ego maka BLG Mind | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
David na-agbanye n'ime iji nweta ego maka BLG Mind
Ihe na December 16, 2020 by BLG Uche Udi: Ego
David Powell, onye ọrụ na Bromley Recovery Works, na-akụda oge oyi a iji nweta ego maka BLG Mind.
Onye nchịkọta ihe nhazigharị ahụ na-achọ igwu mmiri 25km tupu ekeresimesi dịka akụkụ nke Swimathon, bụ nnukwu ego ị na-enweta ego kwa afọ n'ụwa.
Agbanyeghị na mkpọchi pụtara David enweghị ike igwu mmiri mgbe ọ bụla ọ tụrụ anya ya, ọ banyela 22km wee bulie £ 325 nke £ 500.
David kwuru na ihe ịma aka nke Covid-19 mere ka nke a bụrụ oge kachasị mkpa iji mata banyere na ego maka nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
“Ntuziaka na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ihe mgbochi nke mkpọchi emeela ka ọtụtụ ndị nwe mmetụta nke ịnọpụrụ iche. Usoro ọhụrụ nke itinye aka maka ihe omume ụwa dịka ịzụ ahịa, nlekọta na oge ezumike enyewo echiche na mgbidi na-emechi ma na-eme ka egwu egwu a na-ahụ anya ka njọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado David, gaa na nke ya JustGiving peeji. Iji chọpụta ihe ndị ọzọ mere David ji egwu mmiri maka BLG Mind, gaa na blog ya, Agbanyeghi.co.uk.